သတိထားရမယ့် ရာသီတုပ်ကွေး -
ကိုယ်ဝန်ဆောင် အားဆေးလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ “Folic acid” ကို ပထမဆုံး သတိရမိတတ်ကြပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေအနေနဲ့လဲ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေကို “Folic acid” သောက်ဖို့ အကြုံပြုထားကြပါတယ်။ ဘာလို့သောက်သင့်လဲ၊ မသောက်ဖြစ်ရင် ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေရှိမလဲ ဆိုတာကိုတော့ မိခင်လောင်းတွေအနေနဲ့ သတိထားမိသင့်တဲ့အတွက် ဒီစာလေး ရေးသားလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာဝန်တွေက ဘာလို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေကို “Folic acid” သောက်ဖို့တိုက်တွန်းနေကြတာလဲ?
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ “Folic acid” ချို့တဲ့လို့ တွေ့ရမယ့် သွေးအားနည်းရောဂါကို ကာကွယ်ပေးတဲ့အပြင် မွေးလာမယ့်ကလေးတွေအတွက်လဲ ၎င်းရောဂါရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေဖြစ်တဲ့ Neural Tube Defect လို့ခေါ်တဲ့ မွေးရာပါ ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြောဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်တွေကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
Neural Tube Defect က မွေးကင်းစကလေးငယ်တွေမှာ ဘယ်လိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ရှိနိုင်လဲ?
Neural Tube Defect အဖြစ် မွေးကင်းစကလေးငယ်တွေမှာ တွေ့ရအများဆုံးကတော့ Anencephaly နဲ့ Spina Bifida ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Anencephaly ဆိုတာကတော့ မွေးရာပါ ဦးနှောက်ရဲ့ အရေးကြီးအစိတ်အပိုင်းတချို့ ကောင်းမွန်စွာမဖွံ့ဖြိုးသေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါနဲ့မွေးဖွားလာတဲ့ကလေးငယ်တွေဟာ ရက်ကြာကြာ အသက်ရှင်ဖို့ ခဲယဥ်းပါတယ်။
နောက်တမျိုးဖြစ်တဲ့ Spina Bifida ကတော့ မွေးရာပါ ကျောရိုးမကြီးနဲ့ အာရုံကြောမကြီးတို့ ကောင်းမွန်စွာ မဖွံ့ဖြိုးသေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုရောဂါနဲ့မွေးဖွားလာရတဲ့ ကလေးငယ်ဟာ ရာသက်ပန်မသန်စွမ်းတာမျိုးတွေ ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဥ် “Folic acid” လုံလောက်စွာ မရှိခဲ့ရင် မွေးလာမယ့်ကလေးငယ်မှာ Neural Tube Defect အပြင် ဘာတွေဖြစ်နိုင်သေးလဲ။
နှုတ်ခမ်း/အာခေါင်ကွဲခြင်း၊ လမစေ့ပဲမွေးဖွားခြင်း၊ ပေါင်မပြည့်ခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း စတာတွေ ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ “Folic acid” သောက်မယ်ဆိုရင် မိခင်အတွက်ကော ဘာတွေကောင်းကျိုးရနိုင်မလဲ။
မိခင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဥ်အတွင်း တွေ့ကြုံရနိုင်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆိပ်တက်ခြင်း၊ နှလုံးရောဂါ၊ လေဖြတ်ခြင်း၊ တချို့သော ကင်ဆာရောဂါများ၊ Alzheimer’s ရောဂါတွေ ဖြစ်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်းလျော့နည်းစေပါတယ်။
ဒါဆို ဘယ်အချိန်တည်းက စသောက်သင့်သလဲ?
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပြီး “Folic acid” ကို စသောက်သင့်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီဆိုတာ သိသည်နှင့်တပြိုင်နက် သောက်သင့်ပါတယ်။
တနေ့ကို “Folic acid” ဘယ်လောက်ပမာဏ သောက်ရမလဲ?
ကျန်းမာတဲ့မိခင်လောင်းတွေအတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပမာဏကတော့ 400 microgram ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လို အစားအစာတွေမှာ “Folic acid” ပါဝင်လဲ?
အစိမ်းရောင်ရှိသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေဖြစ်တဲ့ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၊ ဂေါ်ဖီထုပ်၊ ဟင်းနုနွယ်၊ ကညွန့် စတာတွေအပြင် ကုလားပဲ၊ ဘိုစားပဲနဲ့ အသည်း စတဲ့အစားအစာတွေမှာ “Folic acid” ပါဝင်ပါတယ်။
Ref: NHS, Grow by WebMD
ကျန်းမာရေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ မေးခွန်းများမေးမြန်းလိုပါက HOPE မှ ဆရာဝန်တွေကို မနက် ၈မှ ည ၈ အတွင်း အခမဲ့ မေးမြန်းဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ရှင့်..
hopeapp #hope #ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကျန်းမာရေး #ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များအတွက်
Nov 15, 2021 Health, Health Tips, Pre-existing Disease
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ဘာလို့ Folic Acid ကအရေးကြီးတာလဲ?